Thai 47 Delivery Menu - Yangon | Order Online
Show All Most Popular Cutlery Appetizer Grilled Som Tam & Salad Chicken, Pork & Beef (Main Courses) Traditional Thai Curry Seafood & Fish (Main Courses) Vegetables & Thai Dipping Paste Hot Plate Dishes Noodles One Portion Side Menu Claypot Soup Soup Thai 47 Dressert Tea Specialties Mixed Fruit Juice Seasonal Fruits Juices Chocolate Smoothies Milkshakes Fresh Juices Italian Soda Hot Coffee Iced Coffee Frappe
Som Tam & Salad
Chicken, Pork & Beef (Main Courses)
Seafood & Fish (Main Courses)
Vegetables & Thai Dipping Paste
Thai 47 Dressert
Seasonal Fruits Juices
No.308, Ahlone Road (Near Pyay Road), Yangon, MM Dagon
Thai 47 offers authentic Thai food cooking is to use main ingredients that are simple but fresh.Thai food in general can be described as medium spicy and it gets it's own particular flavours from coconut milk, onion, chilli, coriander, shrimp paste, fish sauce, garlic and the use of hot sauce.Thai 47 will bring you all the flavour, colour and sound of Thailand withaunique menu inspired by traditional recipe from it's various regions.
No.308, Ahlone Road (Near Pyay Road), Yangon, MM Dagon No MSG added due to the style of our cuisine, we cannot be held responsible for any of our customer's allergies.Please advice us of any dietary requirement.
Grilled Pork Neck (ဝကျဂုတျသားကငျ) (၀က်ဂုတ်သားကင်)
Phad Thai (ပတျထိုငျး) (ပတ်ထိုင်း)
Tom Yam Soup (ထိုငျးရိုးရာတုနျယမျ) (ထိုင်းရိုးရာတုန်ယမ်)
Green Papaya Salad (သဘောင်္သီးထောငျး) (သဘောင်္သီးထောင်း)
Phad Kapaw (ဖကျကဖေါငျး) (ဖက်ကဖေါင်း)
Basil leaf, fresh chili, garlic and string bean
Stir-fried Flame Watercress with Mushroom (မှိုကနျဇှနျးမီးတောကျ) (မှိုကန်ဇွန်းမီးတောက်)
Thai Chicken Satay (ကွကျဆာတေး) (ကြက်ဆာတေး)
Fried Marinated Chicken in Pandan Leaf (ကွကျဆှမျးမှေးဖကျထုပျ) (ကြက်ဆွမ်းမွှေးဖက်ထုပ်)
Pork Leg Stew with Rice and Pickled Mustard (ဝကျလကျထမငျး) (၀က်လက်ထမင်း)
Deep Fried Spring Roll (ကျောပွနျ့ကွျော) (ကော်ပြန့်ကြော်)
Deep Fried Chicken Wings (ကွကျတောငျပံကွှပျကွျော) (ကြက်တောင်ပံကြွပ်ကြော်)
Fried Chicken with Sticky Rice (ကွကျကွှပျကွျောနှငျ့ကောကျညှငျး) (ကြက်ကြွပ်ကြော်နှင့်ကောက်ညှင်း)
Northeastern Spicy Pork Sausage (Isan ၀ကျအူခြောငျးခြဥျစပျ) (Isan ၀က်အူချောင်းချဉ်စပ်)
Thai Style Fried marinated Soft Pork Rib (ဝကျနံရိုးနုကွျော) (ဝက်နံရိုးနုကြော်)
Fried Pork Liver with Garlic & Pepper (၀ကျအသညျးကွကျသှနျဖွူမှေး) (၀က်အသည်းကြက်သွန်ဖြူမွှေး)
Northeastern Fried Milled Rice Pork Ball (ဆနျလှျောရနံ့ဝကျသားလုံးကွှပျကွျော) (ဆန်လှော်ရနံ့ဝက်သားလုံးကြွပ်ကြော်)
Marinated Fried Pork Belly with Crispy Lemongrass (၀ကျခေါကျစပါးလငျ) (၀က်ခေါက်စပါးလင်)
Golden Purse (Minced Chicken & Corn) (ရှထေုပျ) (ရွှေထုပ်)
Deep Fried Pickled Pork Spring Roll (၀ကျသားခြဥျကျောပွနျ့ကွျော) (၀က်သားချဉ်ကော်ပြန့်ကြော်)
Crispy Fried Taro (ပိနျးဥကွှပျကွျော) (ပိန်းဥကြွပ်ကြော်)
Crispy Fried Watercress (ကနျဇှနျးရှကျကွှပျကွျော) (ကန်ဇွန်းရွက်ကြွပ်ကြော်)
Prawn Tempura (ပုဇှနျတနျပူရာ) (ပုဇွန်တန်ပူရာ)
Chicken Tempura (ကွကျသားတနျပူရာကွျော) (ကြက်သားတန်ပူရာကြော်)
Deep Fried Soft Shell Crab with Garlic and Pepper (ဂဏနျးပြော့ကွှပျကွျော) (ဂဏန်းပျော့ကြွပ်ကြော်)
Deep Fried Small Shrimp with Garlic & Pepper (ပုဇှနျသေးကွှပျကွျော) (ပုဇွန်သေးကြွပ်ကြော်)
Shrimp Cake (ပုဇှနျကတျကွျော) (ပုဇွန်ကတ်ကြော်)
Crispy Fried Eel with Garlic Basil & Chili Paste (ငါးရှဉျ့ခွောကျစပျ) (ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်)
Deep Fried Fish Cake (ငါးဖယျကွျော) (ငါးဖယ်ကြော်)
Fried mackerel Fish with Dipping Sauce (ပလာတူးငါးကွျောနှငျ့ထိုငျးငပိ) (ပလာတူးငါးကြော်နှင့်ထိုင်းငပိ)
Thai 47 Roasted Duck
Crying Tiger (200g) (အမဲသားကငျ) (အမဲသားကင်)
Grilling Time - 30mins
Thai 47 Roasted Chicken with Sticky Rice (Thai 47 ကွကျကငျနှငျ့ကောကျညှငျး) (Thai 47 ကြက်ကင်နှင့်ကောက်ညှင်း)
Traditional Grilled Serpent Head Fish (ငါးရံ့ဆားကငျ) (ငါးရံ့ဆားကင်)
Grilling Time - 40mins
Grilled Jack-Knife Clam (ဂုံးယောငျးမကငျ) (ဂုံးယောင်းမကင်)
Thai Style Salt Grilled Fish (ငါးဆားအုံကငျ) (ဂုံးချောကင်)
Thai Grilled Pork Skewer (၀ကျအခြိုကငျ) (၀က်အချိုကင်)
Grilled Squid Stuffed with Minced Prawn & Chicken (ကငျးမှနျအစာသှပျကငျ) (ကင်းမွန်အစာသွပ်ကင်)
Green Papaya Salad with Prawn (ပုဇှနျစိမျးသင်ျဘောသီးထောငျး) (ပုဇွန်စိမ်းသင်္ဘောသီးထောင်း)
Crispy Cat Fish Salad (ငါးခူမှကွျောသုပျ) (ငါးခူမွှကြော်သုပ်)
Spicy Seafood Salad (ပငျလယျစာအစုံသုပျ) (ပင်လယ်စာအစုံသုပ်)
Spicy Fresh Tiger Prawn Salad (ပုဇှနျအစိမျးသုပျ) (ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်)
Spicy Octopus Salad (ရဘေဝဲသုပျ) (ရေဘ၀ဲသုပ်)
Spicy Clam Salad (ဂုံးခြဥျစပျသုပျ) (ဂုံးချဉ်စပ်သုပ်)
Corn Pounded Salad (ပွောငျးဖူးထောငျး) (ပြောင်းဖူးထောင်း)
Green Papaya Salad with Fried Soft Shell Crab (ဂဏနျးပြေ့ာကွှပျကွျောသင်ျဘောသီးထောငျး) (ဂဏန်းပျေ့ာကြွပ်ကြော်သင်္ဘောသီးထောင်း)
Spicy Glass Noodle Salad (ပဲကွာဇံသုပျ) (ပဲကြာဇံသုပ်)
Grilled Eggplant Salad (ခရမျးသီးမီးဖုတျသုပျ) (ခရမ်းသီးမီးဖုတ်သုပ်)
Four-Angled Bean Salad (ပဲစောငျးလြားသီးသုပျ) (ပဲစောင်းလျားသီးသုပ်)
Fried Egg Salad (ကွကျဥကွျောသုပျ) (ကြက်ဥကြော်သုပ်)
Spicy Green Mango Salad (သရကျသီးသုပျ) (သရက်သီးသုပ်)
Spicy Assorted Mushroom Salad (မှိုအစုံသုပျ) (မှိုအစုံသုပ်)
Pork Liver Salad with Milled Rice (ဝကျအသညျးဆနျလှျောသုပျ) (ဝက်အသည်းဆန်လှော်သုပ်)
Grilled Pork Neck Salad with Milled Rice (ဆနျလှျောဝကျဂုတျကငျသုပျ) (ဆန်လှော်ဝက်ဂုတ်ကင်သုပ်)
Grilled Beef Salad with Milled Rice (ဆနျလှျောအမဲကငျသုပျ) (ဆန်လှော်အမဲကင်သုပ်)
Fried Snake Head Fish Salad with Milled Rice (ငါးရံ့ကွှပျကွျောဆနျလှျောသုပျ) (ငါးရံ့ကြွပ်ကြော်ဆန်လှော်သုပ်)
Fried Chicken Salad with Milled Rice (ကွကျကွှပျကွျောဆနျလှျောသုပျ) (ကြက်ကြွပ်ကြော်ဆန်လှော်သုပ်)
Spicy Mincemeat Salad (အသားစငျးကောသုပျ) (အသားစင်းကောသုပ်)
Crispy Pork Belly Kapaw (ဝကျခေါကျဖတျကဖောငျး) (ဝက်ခေါက်ဖတ်ကဖောင်း)
Pork Liver Kapaw (၀ကျအသညျးကဖောငျး) (၀က်အသည်းကဖောင်း)
Stir Fried Pork Liver with Ginger & Spring Onion (၀ကျအသညျးဂငျြးမှေး) (၀က်အသည်းဂျင်းမွှေး)
Red Pork with Spicy Homemade Sauce and Bok Choy (ဝကျသားနီအစပျခကျြ) (ဝက်သားနီအစပ်ချက်)
Stir Fried Chicken with Fresh Chili & Garlic Sauce (ကွကျအစပျခကျြ) (ကြက်အစပ်ချက်)
Deep Fried Burmese Chicken with Lemongrass (ဗမာကွကျစပါးလငျမှေး) (ဗမာကြက်စပါးလင်မွှေး)
Stir Fried Pork Rib Phad Prik Gaeng Curry with String Bean (၀ကျနံရိုးဖကျဖဈတနျဆော့ဈ) (၀က်နံရိုးဖက်ဖစ်တန်ဆော့စ်)
Stir Fried Nam Prik Phao Sauce (နမျ့ပဈဖောငျ) (နမ့်ပစ်ဖောင်)
Stir Fried Oyster Sauce with Mushroom (အသားခရုဆီ) (အသားခရုဆီ)
Stir Fried Roasted Cashewnut with Meat (သီဟိုဠျစအေ့သားနှပျ)(သီဟိုဠ်စေ့အသားနှပ်)
Soy sauce, roasted cashew nut, onion, spring onion and bell pepper
Pork Leg Stew (ဝကျလကျပေါငျး) (၀က်လက်ပေါင်း)
Pork leg stew with kale, pickled mustard and egg
Thai 47 Signature Omelet with Homemade Fish Dipping (ကွကျဥမှကွေျောနှငျ့ထိုငျးငပိ) (ကြက်ဥမွှေကြော်နှင့်ထိုင်းငပိ)
Khai Look Khoey (မနျကညျြးသီးဆော့ကွကျဥပွုတျကွျော) (မန်ကျည်းသီးဆော့ကြက်ဥပြုတ်ကြော်) )
Crab Meat Omelet (ဂဏနျးသားကွကျဥမှကွေျော) (ဂဏန်းသားကြက်ဥမွှေကြော်)
Stir Fried Black Pepper Sauce (ငရုတျကောငျးမဲခကျြ) (ငရုတ်ကောင်းမဲချက်)
Stir Fired Clam with Fresh Chili & Basil (ဂုံး‌ခွောကျစပျ) (ဂုံး‌ခြောက်စပ်)
Grilled Pork Neck with Lime Garlic & Chili Sauce (ဂုတျကငျသံပုရာဆော့ဈ) (ဂုတ်ကင်သံပုရာဆော့စ်)
Stir Fried Sliced Beef with Ginger & Mushroom (အမဲဂငျြးမှေး) (အမဲဂျင်းမွှေး)
Soft Shell Crab Masala Curry (ဂဏနျးပြော့မဆလာ) (ဂဏန်းပျော့မဆလာ)
Crab Meat Masala Curry (ဂဏနျးသားမဆလာ) (ဂဏန်းသားမဆလာ)
Spicy Pork Rib Phad Prik Gaeng Curry with String Bean (၀ကျနံရိုးဖကျဖဈကနျဆော့ဈ) (၀က်နံရိုးဖက်ဖစ်ကန်ဆော့စ်)
Chicken Massaman Curry (ကွကျမကျဈစမနျ Curry) (ကြက်မက်စ်စမန် Curry)
Grilled Pork Neck Curry with Acacia Leaf (ဝကျဂုတျသားကငျဆူးပုတျရှကျဟငျး Red Curry) (ဝက်ဂုတ်သားကင်ဆူးပုတ်ရွက်ဟင်း Red Curry)
Prawn Red Curry with Pineapple & Basil (အနီရောငျအနှဈပုဇှနျနာနတျသီးဟငျး) (အနီရောင်အနှစ်ပုဇွန်နာနတ်သီးဟင်း)
Chicken Yellow Curry with Potato (Yellow Curry ကွကျသားအာလူးဟငျး) (Yellow Curry ကြက်သားအာလူးဟင်း)
Green Curry with Pea Eggplant (အစိမျးရောငျအနှဈးဟငျး) (အစိမ်းရောင်အနှစ်းဟင်း)
Stir Fried Crab Meat with Fresh Chili & Garlic Sauce (ဂဏနျးသားအစပျခကျြ) (ဂဏန်းသားအစပ်ချက်)
Gaeng Phad Red Curry with Pea Eggplant (ကနျ့ဖကျ) (ကန့်ဖက်)
Choice of chicken, pork or prawn
Panang Curry (Panang အနှဈအသားနှပျဟငျး) (Panang အနှစ်အသားနှပ်ဟင်း)
Deep Fried Snake Head Fish with Traditional Homemade Sauce (ငါးရံ့ကောငျလုံးကွှပျကွျောထိုငျးခြဥျစပျဆော့ဈဆမျး) (ငါးရံ့ကောင်လုံးကြွပ်ကြော်ထိုင်းချဉ်စပ်ဆော့စ်ဆမ်း)
Traditional Spicy Curry with Serpent-Head Fish (ငါးရံ့တောချက်)
Sweet & Sour Seabass with Thai 47 Sauce (ကက်ကတဈခြိုခဉျြ) (ကက္ကတစ်ချိုချဉ်)
Deep Fried Seabass with Thai 47 Sauce (ကက်ကတဈကွှပျကွျောမှေး) (ကက္ကတစ်ကြွပ်ကြော်မွှေး)
Deep Fried Seabass with Bird Chili Sauce (ကက်ကတဈကွှပျကွျော ငရုတျသီးစိမျးဆော့ဈ) (ကက္ကတစ်ကြွပ်ကြော် ငရုတ်သီးစိမ်းဆော့စ်)
Spicy Steamed Sea Bass with Lime Sauce (ကက္ကတစ်ငါးသံပုရာပေါင်း) (ကက်ကတဈငါးသံပုရာပေါငျး)
Deep Fried Sea Bass with Tamarind Sauce (ကက်ကတဈမနျကညျြးသီးဆော့ဈကက်ကတဈ) (ကက္ကတစ်မန်ကျည်းသီးဆော့စ်ကက္ကတစ်)
Stir Fried River Prawn with Fresh Chili & Garlic Sauce (ရခြေိုပုဇှနျအစပျခကျြ) (ရေချိုပုဇွန်အစပ်ချက်)
Spicy Jack-Knife Clam with Garlic Sauce (ဂုံးယောငျးမကွကျသှနျဖွူခြဥျစပျ) (ဂုံးယောင်းမကြက်သွန်ဖြူချဉ်စပ်)
Stir Fried Jack-Knife Clam with Fresh Chili & Garlic Sauce (ဂုံးယောငျးမအစပျခကျြ) (ဂုံးယောင်းမအစပ်ချက်)
Stir Fried Tom Yam Paste (တုနျယမျးအနှဈခကျြ) (တုန်ယမ်းအနှစ်ချက်)
Stir Fried Stuffed Squid with Fresh Chili & Garlic Sauce (ကငျးမှနျအစာသှပျအစပျခကျြ) (ကင်းမွန်အစာသွပ်အစပ်ချက်)
Stir Fried Black Pepper Prawn (ပုဇှနျငရုတျကောငျးမဲခကျြ) (ပုဇွန်ငရုတ်ကောင်းမဲချက်)
Stir Fried Seabass Fillet with Black Pepper Sauce (ကက်ကတဈငရုတျကောငျးမဲခကျြ) (ကက္ကတစ်ငရုတ်ကောင်းမဲချက်)
Stir Fried Seabass Fillet with Ginger & Chinese Celery (ကက်ကတဈဂငျြးမှေး) (ကက္ကတစ်ဂျင်းမွှေး)
Phuket Style Grilled Prawn (ဖူးခကျစတိုငျရခေြိုပုဇှနျကငျ) (ဖူးခက်စတိုင်ရေချိုပုဇွန်ကင်)
Stir-Fried Sweet and Sour Prawn with Pineapple (ပုဇှနျနာနတျသီးခြိုခြဥျ) (ပုဇွန်နာနတ်သီးချိုချဉ်)
Deep Fried River Prawn with Garlic and Pepper (ပုဇှနျထုပျကွကျသှနျဖွူမှေး) (ပုဇွန်ထုပ်ကြက်သွန်ဖြူမွှေး)
Black Pepper Crispy Soft Shell Crab (ဂဏနျးပြော့ငရုတျကောငျးမဲဆော့ဈ) (ဂဏန်းပျော့ငရုတ်ကောင်းမဲဆော့စ်)
Stir Fried Squid with Salted Egg (ကငျးမှနျဆားဘဲဥအနှဈခကျြ) (ကင်းမွန်ဆားဘဲဥအနှစ်ချက်)
Stir Fried Prawn with Salted Egg (ပုဇှနျဆားဘဲဥအနှဈခကျြ) (ပုဇွန်ဆားဘဲဥအနှစ်ချက်)
River Prawn with Tamarind Sauce (ပုဇှနျထုပျမနျကညျြးသီးဆော့ဈ) (ပုဇွန်ထုပ်မန်ကျည်းသီးဆော့စ်)
River Prawn Masala Curry (ပုဇှနျထုပျမဆလာ) (ပုဇွန်ထုပ်မဆလာ)
Sweet & Sour Seabass Whole Fish (ကက်ကတဈခြိုခဉျြ) (ကက္ကတစ်ချိုချဉ်)
Stir-fried Mixed Vegetables with Garlic and Oyster Sauce (သီးရှကျစုံကွျော ခရုဆီ) (သီးရွက်စုံကြော်ခရုဆီ)
Stir-fried Kale in Oyster Sauce (ကိုကျလနျခရုဆီ) (ကိုက်လန်ခရုဆီ)
Stir-fried Asparagus in Oyster Sauce (ကညှတျကွျောခရုဆီ) (ကညွတ်ကြော်ခရုဆီ)
Stir-fried Chayote Shoot with Garlic and Bean Curd (ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျောနှငျ့ပဲပွားလိပျ) (ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်နှင့်ပဲပြားလိပ်)
Stir-fried Spinach (ဟငျးနုနှယျကွျော) (ဟင်းနုနွယ်ကြော်)
Stir-fried Bean Sprout with Egg-Tofu (ဂပြနျတို့ဟူးပဲပငျပေါကျကွျော) (ဂျပန်တို့ဟူးပဲပင်ပေါက်ကြော်)
Phuket Style Shrimp Paste Served with Mixed Vegetables and Mackerel Fish (ဖူးခတျစတိုငျပုဇှနျငါးငပိထောငျးပလာတူးငါးကွျော) (ဖူးခတ်စတိုင်ပုဇွန်ငါးငပိထောင်းပလာတူးငါးကြော်)
Northern Thai Style Fish Paste Dip (ထိုငျးရိုးရာငပိခကျြနှငျ့တို့စရာ) (ထိုင်းရိုးရာငပိချက်နှင့်တို့စရာ)
Served with boiled egg and mixed vegetables
Stir Fried Broccoli with Shrimp (ပုဇှနျနှငျ့ပနျးပှငျ့စိမျးကွျော) (ပုဇွန်နှင့်ပန်းပွင့်စိမ်းကြော်)
Hot and Sour Tofu Hot Plate (တို့ဟူးခြဥျစပျဟော့ပလိပျ) (တို့ဟူးချဉ်စပ်ဟော့ပလိပ်)
Hot and Sour Hot Plate (ခြဥျစပျဟော့ပလိပျ) (ချဉ်စပ်ဟော့ပလိပ်)
Stir Fried Phad Char Hot Plate (ဖတျခြာဟေ့ာပလိပျ) (ဖတ်ချာဟေ့ာပလိပ်)
Spicy stir fried prawn, seafood, frog with Thai herbs
Oyster Omelet Hot Plate (ကမာကွကျဥမှကွေျောဟော့ပလိပျ) (ကမာကြက်ဥမွှေကြော်ဟော့ပလိပ်)
Grilled Pork Neck on Hot Plate with Homemade Sauce (ဂုတျသားကငျ ဟော့ပလိပျ) (ဂုတ်သားကင် ဟော့ပလိပ်)
Beef Slice Black Pepper Hot Plate (အမဲသားငရုတျကောငျးမဲဟေ့ာပလိပျ) (အမဲသားငရုတ်ကောင်းမဲဟေ့ာပလိပ်)
Steamed Glass Noodle with Prawn in Clay Pot (ပုဇှနျမွအေိုးပဲကွာဇံပေါငျး) (ပုဇွန်မြေအိုးပဲကြာဇံပေါင်း)
Authentic Thai Fish Curry with Rice Noodle (ထိုငျးရိုးရာမုနျ့ဟငျးခါး) (ထိုင်းရိုးရာမုန့်ဟင်းခါး)
Stir-fried Glalss Noodle (ပဲကွာဇံကွျော) (ပဲကြာဇံကြော်)
Spicy Stir-fried Big Flat Noodle with Hot Basil (ပငျစိမျးရနံ့ညှပျခေါကျဆှဲအစပျကွျော) (ပင်စိမ်းရနံ့ညှပ်ခေါက်ဆွဲအစပ်ကြော်)
Stir-fried Big Flat Noodle (ထိုငျးညှပျခေါကျဆှဲအခြိုကွျော) (ထိုင်းညှပ်ခေါက်ဆွဲအချိုကြော်)
Guay Tiew Tom Yam Soup (ကှသေ့ယိုတုနျယမျခေါကျဆှဲပွုတျ) (ကွေ့သယိုတုန်ယမ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Guay Tiew Soup (ကှသေ့ယိုခေါကျဆှဲပွုတျ) (ကွေ့သယိုခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Guay Tiew Tom Yam Salad (ကှသေ့ယိုတုနျယမျခေါကျအသုပျ) (ကွေ့သယိုတုန်ယမ်ခေါက်အသုပ်)
Rad Na Stir Fried Big Flat Noodle with Broccoli (Rad Na ညှပျခေါကျဆှဲကွျော) (Rad Na ညှပ်ခေါက်ဆွဲကြော်)
Spicy Stir-fried Big Flat Noodle (ညှပျခေါကျဆှဲအစပျကွျော) (ညှပ်ခေါက်ဆွဲအစပ်ကြော်)
Crab Meat Fried Rice (ဂဏနျးသားထမငျးကွျော) (ဂဏန်းသားထမင်းကြော်)
Hot Basil Fried Rice (ပငျစိမျးထမငျးကွျော) (ပင်စိမ်းထမင်းကြော်)
Tom Yam Fried Rice (တုနျယမျထမငျးကွျော) (တုန်ယမ်ထမင်းကြော်)
Pineapple Fried Rice (နာနတျသီးထမငျးကွျော) (နာနတ်သီးထမင်းကြော်)
Shrimp Paste Fried Rice (ငါးပိထမငျးကွျော) (ငါးပိထမင်းကြော်)
Spicy Shrimp Paste Fried Rice with Salted Egg (ဆားဘဲဥငါးပိအစပျထမငျးကွျော) (ဆားဘဲဥငါးပိအစပ်ထမင်းကြော်)
Dry Salted Fish Fried Rice (ငါးပုတျခွောကျထမငျးကွျော) (ငါးပုတ်ခြောက်ထမင်းကြော်)
Steamed Coconut Rice, Green Papaya Salad & Deep Fried Chicken (အုနျးထမငျးကွကျကွျောသင်ျဘောသီးထောငျး) (အုန်းထမင်းကြက်ကြော်သဘောင်္သီးထောင်း)
Chicken Rice (ကွကျဆီထမငျး) (ကြက်ဆီထမင်း)
Serpent Head Fish Congee (ငါးရံ့မွအေိုးဆနျပွုတျ) (ငါးရံ့မြေအိုးဆန်ပြုတ်)
Chicken Congee (ကွကျသားဆနျပွုတျ) (ကြက်သားဆန်ပြုတ်)
Rice with Yellow Curry (ထမငျးနှငျ့ Yellow Curry) (ထမင်းနှင့် Yellow Curry)
Rice with Green Curry (ထမငျးနှငျ့ Green Curry) (ထမင်းနှင့် Green Curry)
Rice with Panang Red Curry (ထမငျးနှငျ့ Panang Red Curry) (ထမင်းနှင့် Panang Red Curry)
Thai 47 Fried Fried Rice (Thai 47 ထမငျးကွျော) (Thai 47 ထမင်းကြော်)
Grilled Pork Neck Rice (၀ကျဂုတျသားကငျထမငျး) (၀က်ဂုတ်သားကင်ထမင်း)
Phad Kapaw Rice (ကွကျပငျစိမျးထမငျး) (ကြက်ပင်စိမ်းထမင်း)
Fried Egg 1 Pc
Chicken Rice (Extra)
Spicy Traditional Clay-Pot Soup (မွအေိုးတောခကျြ) (မြေအိုးတောချက်)
Spicy Prawn Clay-Pot Soup with Fried Acacia Leaf (ပုဇှနျနှငျ့ဆူးပုတျရှကျမွအေိုးခြဥျစပျဟငျး) ပုဇွန်နှင့်ဆူးပုတ်ရွက်မြေအိုးချဉ်စပ်ဟင်း)
Chaing Mai Style Spicy Prawn Paste (ခငျြးမိုငျသီးရှကျစုံငါးပိအစပျဟငျး) (ချင်းမိုင်သီးရွက်စုံငါးပိအစပ်ဟင်း)
Spicy Clear Mushroom Soup (မှိုအစုံအစပျဟငျးခြို) (မှိုအစုံအစပ်ဟင်းချို)
Clear Tom Yam Soup (တုနျယမျအကွညျ) (တုန်ယမ်အကြည်)
Tom Kha (အုနျးနို့တုနျယမျ) (အုန်းနို့တုန်ယမ်)
Spicy Pork Rib Soup (ဝကျနံရိုးခြဥျစပျဟငျးခြိူ) (ဝက်နံရိုးချဉ်စပ်ဟင်းချိူ)
Tofu Soup with Meat Ball (တို့ဟူးအသားလုံးဟငျးခြို) (တို့ဟူးအသားလုံးဟင်းချို)
Spicy Steamed Squid (ကငျးမှနျသံပုရာပေါငျး) (ကင်းမွန်သံပုရာပေါင်း)
Durian Sticky Rice (ဒူးရင်းကောက်ညှင်း)
Durian with Milk Cream (ဒူးရင်းမလိုင်)
Thai Young Coconut Water
Ice Blended Thai Coconut Juice
Honey Banana with Coconut Ice Cream
Thai 47's Iced Tea
Iced-Blended Green Tea
Matcha Green Tea Float
Twinning Breakfast Tea
(Apple/ carrot/ orange/ ginger)
Thai Guava Fruits Juices
Passion Fruits Juices
Avocado Fruits Juices
Strawberry Fruits Juices
Mango Fruits Juices
Dragon Fruits Juices
Oreo Iced Chocolate Frost
Lime Frost with Honey
THAI 47's Iced Coffee